Carruurta keligood yimaada Finland ee megangelyo-doonka ah waxeyn ku jiraan xaalad gaar ah - Asylum in Finland
Carruurta megangelyo-doonnimada ku timaada Finland waxaa loo badbaadiyaa megangelyo-doon ahaan, laakiin carruur ahaanta ayaa ugu horeysa. Mabaa’diidan waxey Finland ku xushmeynaysaa heshiiska xuquuqda carruurta ee Qaramada Midowday, kaas oo sheegaya in carruurta aan qaangaarin ay xaq u leeyihiin badbaadin gaar ah iyo kaalmo. Megangelyo-doonka aan qaagaarin ee kaligiis yimid Finland waxaa loola jeedaa megangeyo-doonka ka yar 18 sano ee mas’uul la’aan jooga Finland.
Megangelyo-doonka aan qaangaarin ee kaligiis yimid waxaa la dejinayaa xarun qaabilaad oo si gaar ah loogu talagalay carruurta, halkaas oo baahidiisa maalmeed wax looga qabanayo. Cunugga waxaa loo qabanqaabinayaa waxbarasho dugsiyeed ku heer ah aqoontiisa iyo da’diisa. Haddii loo baahdo turjubaan ayaa la kaalmeysanayaa.
Mudada laga baaraandegayo codsigiisa megangelyada, cunuggu wuxuu helayaa wakiil. Wakiilku wuxuu ilaalinayaa hirgelinta danta cunugga, wuxuu ka caawinayaa arrimaha dowladda la xiriira wuxuuna ka qeybgelayaa wareygsiga megangelyada ee la xiriira ka baaraandegista codsiga megangelyada. Codsiga megangelyada ee cunugga aan qaangaarin waxaa looga baaraandegaa si degdeg ah.
Maadaama xuquuq iyo waajiibaadyo gaar ah oo sharciga ku qoran ay leeyihiin dadka aan qaangaarin, caddeynta da’da megangelyo-doonku waa muhiim. Haddii aan da’da codsadaha la hubin, waxaa lagu sameyn karaa baaritaan sharciyeed cilmiyeysan. Baaritaanka waxaa inta badan laga sameeyaa ilkaha iyo lafta curcurka. Haddii uu codsaduhu sababo la aqbali karo la’aantood ku diido baaritaanka, waxaa loo arkayaa qof qaangaar ah. Markaasna waa in uu u guuraa xarunta qaabilaadda ee loogu talagalay dadka qaangaarka ah. Marka go’aanka megangelyada la sameynayana waxaa isaga loo arkayaa qof qaangaar ah.